Firefox 77 iri pano uye inouya neAVIF rutsigiro, WebRender zvinowedzera, tsaona nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 77 iri pano uye inouya neAVIF rutsigiro, WebRender zvinowedzera, tsaona nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeakakurumbira webhu bhurawuza "Firefox 77" iri pano, pamwe neshanduro yefoni yeFirefox 68.9 yeiyo Android chikuva, pamusoro pezvo, gadziriso yeyakareba rutsigiro vhezheni yeFirefox 68.9.0 yagadzirwa.
Pakati pezvinhu zvikuru zvitsva kiyi yekusunungurwa uku, kuwedzerwa kwepeji rebasa idzva kunoratidzwa "About: chitupa" kuwana iyo yakavakirwa-mukati chitupa chekutarisa interface. Muchidimbu, unogona kunyora zvitupa zvakachengetedzwa, tarisa ruzivo rwechitupa chimwe nechimwe, wozvitumira kunze (kunyangwe iyo rutsigiro rwekunze rwusati rwawanikwa izvozvi).
Imwe shanduko huru iko kutsigira kwekuyedza kweAVIF fomati fomati, iyo inoshandisa ye-intra-furemu yekumanikidza tekinoroji yeAV1 vhidhiyo encoding fomati inotsigirwa kubvira Firefox 55. (kugonesa AVIF mune nezve: config, sarudzo image.avif.enabled.)
Mudziyo wekuparadzira yakadzvanywa dhata muAVIF yakafanana zvachose neHEIF. AVIF inotsigira HDR (yakakwirira inesimba renji) mifananidzo uye yakafara gamut ruvara nzvimbo, pamwe neyakajairika simba renji (SDR).
Uyewo, Izvo zvinoonekwa zvakare kuti huwandu hwesystem ye lIyo yekuumbwa sisitimu inosanganisirwa webrender, yakanyorwa mumutauro weRust iyo inogonesa kuwedzera kwakakosha mukupa mhanyisa uye kudzikisa CPU mutoro.
WebRender inounza zvemukati zvemukati zvichipa mashandiro kudivi reGPU, inoitwa kuburikidza nemumvuri unomhanya paGPU. WebRender ikozvino inogoneswa pamakomputa neIntel Skylake GT1, AMD Raven Ridge APU, AMD Evergreen uye malaptop ane makadhi emifananidzo eNVIDIA anomhanya Windows 10. Kumanikidza kuiswa mune nezve: gadzira, gonesa masetingi «gfx.webrender.all "uye" gfx .webrender.enabled «Kana tanga Firefox nemamiriro ekusiyana akaiswa MOZ_WEBRENDER = 1.
Padivi rekero bar inomira pachena kuti kuongororwa kwemitsara yekutsvaga kwakagadziridzwa. Mazwi ane nguva zvino anoongororwa pakutaurirana nematanho chaiwo.
Ndichiri mumugadziri, chinhu chitsva chakawedzerwa kukiki nzira dzekuvharira dzinodonhedza pasi block muzvirongwa zvekuvharira kufamba kwekutenderera uchivhara kupatsanura makuki nedomeini inoratidzwa mune bar yekero.
Kurerutsa lKufambisa pane zvishandiso zvine touch skrini, iyo induction mubhukumaki bhaa yakawedzerwa (Kana iwe ukavhura tebhu nyowani, iyo nyowani kero yeMegabar kadhi inovharidzira bhukumaki bhaa uye inosiya kamuri diki yekudzvanya).
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni yebrowser, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 77 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni kana kugadzirisa kwairi, vanofanirwa kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi.
Kana iwe uri mushandisi weUbuntu, Linux Mint kana imwewo yakabva kuUbuntu, Unogona kuisa kana kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni nerubatsiro rwePPA yebrowser.
sudo snap install firefox-77.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 77 iri pano uye inouya neAVIF rutsigiro, WebRender zvinowedzera, tsaona nezvimwe
WhatsApp Web ikozvino inotsigira Facebook makamuri evhidhiyo mafoni evanosvika vanhu makumi mashanu
Iyo nyowani vhezheni yeLinux Kernel 5.7 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo